Mid ka mid ah laacibiintii Manchester United oo isu soo taagey doorasho madaxweynimo – SBC
Mid ka mid ah laacibiintii Manchester United oo isu soo taagey doorasho madaxweynimo
Posted by editor on January 10, 2012 Comments
Mid ka mid ah laacibiintii caanka aheyd ee soo martey kooxda kubada cagta Manchester United ayaa shaaca ka qaaday in uu isu soo taagayo doorasho madaxweynenimo oo la filayo inay dhacdo dhawaan.
Eric Cantona oo Man United uga ciyaari jirey afka hore ama weerarka ayaa daboolka ka qaaday in uu u tartami doono jagada madaxweynaha Faransiiska doorashada soo socota.
45 jir Eric Cantona oo sanadkii 1992-kii ku biiray Garoonka Old Trafford ee kooxda Man United waxaana uu ka mid ahaa shan sano isagoo saftey 144 kulan oo uu dhaliyey 45 gool, wuxuu kula guuleystey horyaalka Premier League sanadihii 1993, 1994, 1996 & 1997, isagoo sidoo kale la qaaday laba koob oo FA Cup ah oo is xiga.
Eric Cantona wuxuu sheegay in uu baadi goob ugu jiro saxiixa 500 qof oo looga baahan yahay, isagoo dhamaadka bisha soo socota ee February saxiixyada u gudbin doona maamulada degmooyinka inay taageeraan qorshihiisa tartanka doorashada.
Isagoo la hadlayey wargeyska Liberation ayuu sheegay in uu qorsheynayo sidii uu xooga u saari lahaa ku guuleysiga tartanka doorashada madaxtinimada, waxaana uu sheegay in uu wax ka qaban doono arimaha dadka da’a yarta ah ee dhibaatooyinku ku haystaan dalka Faransiiska.
, said: “This engagement obliges me to speak, more earnestly than usual, but also with a keen sense of my responsibility, at a time when our country faces difficult choices which will be decisive for its future.”
Wuxuu sanadkii 1983 ku biiray kooxda Auxerre, laakiin 1988-dii wuxuu u wareegay kooxda Marseille, sanadkii 1991-dii ayuu uga sii booday kooxda Nimes, hase yeeshee 1992-dii ayuu kooxda Leeds ka mid noqdey, waxaana uu uga sii talaabay Manchester United oo uu la qaaday koobkoodii ugu horeeyey ee Premier League-ga halkaasi uu ku dhameystey waqtigiisii kubada cagta.
U tartanka doorashada madaxtinimada Faransiiska waxaa looga baahan yahay musharaxa doonaya in uu tartamo in uu helo saxiixyada loo baahan yahay si uu ugu tartamo wareega koowaad ee doorashada ee dhacaysa bisha April, iyadoo laba musharax ee ugu codadka badan ay gali doonaan wareega labaad ee tartanka doorashada oo la qabanayo bisha May ee isla sanadkan.
Eric Cantona oo la fadhiya Sir Alex maalintii uu ku biiray Man United
Markii uu ka fariistey ciyaaraha wuxuu tababare u noqdey kooxda New York Cosmos ee wadanka Mareykanka, waxaa kale oo xus mudan in uu ka mid ahaa laacibiintii xulka qaranka Faransiiska, isagoo mudooyin kala duwan ahaa captain-ka xulka.
Sanadkii 2010-kii ayay aheyd markii uu warbaahinta Faransiiska Eric Cantona sida weyn uga soo dhexmuuqdey isagoo dadka Faransiiska ugu baaqay inay kala baxaan lacagahooda oo ay faaruqiyaan account-yada ay ku leeyihiin bangiyada taasi oo ah mudaharaad ka dhan ah dhibaatada dhaqaale ee dunida.
Cantona, wuxuu mar dambe noqdey actor filimada sameeya,isagoo haatana u xusul duubanaya mihnad kale oo sadexaad oo ah xaga siyaasada, isagoo horey laba kala ah kubada cagta iyo Filim sameynta u soo qabtey, waase loo jooga waxa uu ka keeno hamigiisan ay tahay markiisii ugu horeysay.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB BADANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
c/risaaq siciid xirsi (788394) says:
waa suura gal maxaa yeelay joorje wehba wuu isu soo sharaxay akiin nasiibdaro kuma guulaysan